नारायण गोपालको चर्चित अति दुर्लभ अन्तरवार्ताः – ‘म जे छु, नेपाल र नेपालीले गर्दा नै छु’ .. – Superhit News
नारायण गोपालको चर्चित अति दुर्लभ अन्तरवार्ताः – ‘म जे छु, नेपाल र नेपालीले गर्दा नै छु’ ..
December 28, 2017 superhit news0Comments
रत्न रेकर्डिङ संस्थाले आफ्नो दायित्व कतिको पूरा गरेको छ? तत्कालीन श्री ५ बडामहारानी रत्नराज्यलक्ष्मीदेवी शाहबाट नेपाली कलाकारहरुको गीतको राम्रो रेकर्डिङ होस् भनी आफ्नो निजी कोषबाट रुपैँया बक्स भै सँस्थाको स्थापना गराइबक्सेको हो। तर आज यो संस्था गीत रेकर्डिङभन्दा बढी अरु कार्यक्रमहरुमा पैसा र समय खर्च गरिरहेको छ। जस्तै कहिले शुभकामना सङ्गीत भन्छ र कहिले प्रतिभाको खोजी भन्छ। खोजेर पनि कहीँ प्रतिभा पाइन्छ? प्रतिभा आफैँ प्रस्फुटित हुने कुरा हो। त्यसैले प्रतिभा खोज्नेभन्दा प्रस्फुटित प्रतिभालाई जोगाउने र संरक्षण गर्ने काममा लाग्नुपर्छ। आफ्नो साधनको राम्रो सदुपयोग गरेको भए यो संस्था आज निकै सफल र सार्थक हुने थियो। तर त्यहाँ पनि गिरोह नै हावी छ। आज राजनीतिक क्षेत्रमा झैँ साँस्कृतिक क्षेत्र पनि भूमिगत गिरोहबाट पीडित छ। चाहे रेडियो नेपाल हेर्नुस्, चाहे रत्न रेकर्डिङ, चाहे एकेडेमी– हरेक क्षेत्रको व्यवस्थापन केही स्वार्थी व्यक्तिहरुको गिरोहको प्रभाव र षड्यन्त्रमा फँसेको छ। कोहीकोही आजकल नारायणगोपाल गाउन छोड्यो भन्छन्। यो प्रचार झुठो हो र प्रायः रेडियो नेपाल र रत्न रेकर्डिङमा बसेका गिरोहहरु नै यस्तो प्रचार गरी हिँड्छन्। मैले रत्न रेकर्डिङको ब्यानरमा हालै ७ ओटा गीत रेकर्ड गराएको छु। तर अहिलेसम्म त्यसमध्ये एउटा पनि गीत रेडियोमा बजाइएको छैन। मलाई लाग्छ, ती गीत पनि मेरो अरु गीतहरुजस्तै लोकप्रिय हुनेछन्।
तपाईंलाई साँस्कृतिक संस्थानको महाप्रबन्धकबाट हटाउनुको कारण के थियो? म २०३७ सालमा त्यस संस्थानको महाप्रबन्धक बनाइँए। तर म किन बनाइएँ र कसले बनायो भन्ने थाहै पाइनँ। मलाई जि.एम बनाइदेऊ भनी म कसैकहाँ हात जोड्न गएको थिइनँ। तर बनाइएपछि आफ्नो जिम्मेदारी इमान्दारीपूर्वक गरिआएको थिएँ। २०४१ सालमा त्यहाँबाट हटाइएँ। तर किन हटाइएँ र कसले हटायो भन्ने पनि थाहा पाइनँ र म कतै सोध्न गएको पनि छुइनँ। अब एकछिन फेरि तपाईंको आफ्नै विषयतिर फर्कौँ।
तपाईं आफूले गाउने गीतको छनौट कसरी गर्नुहुन्छ? आफूलाई मन परेका गीत मात्र गाउनुहुन्छ? हो, म सकेसम्म आफूलाई मन परेका गीतहरु मात्र गाउने प्रयास गर्छु। तर कहिलेकाहीँ साथीहरुले कचकच गर्छन् र मन नपरेका गीत पनि गाउनुपर्छ। एकदुई ओटा नेपाली फिल्ममा पनि मैले आफूलाई मन नपरेका गीतहरु गाएको छु। मलाई अझै मनमा लागिरहेछ। सायद त्यसो गरेर पनि मैले गल्ती गरेँ। अबदेखि म आफूलाई मन नपरेका गीतहरु गाउँदिन। गीतकारको नाम हैन, गीत हेरेर छनौट गर्छु।
मालती मङ्गलेमा गाएर कति पैसा पाउनुभयो? नेपाली गायक र सङ्गीतकारहरुको कति शोषण भै रहेको छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण मालती–मंगले पनि हो। कुनै पनि गीतिनाटकको सफलता र असफलता गीतको गायन र सङ्गीतमा निर्भर गर्दछ। मालती–मङ्गलेको सफलताको श्रेय दर्शकहरुले कथालाई भन्दा गायन र सङ्गीत राम्रो नभएको भए कथाले मात्र केही हुँदैनथ्यो। तर श्री ५ महाराजधिराजबाट बक्सेको एक लाख रुपैँयाबाट लेखकले २० हजार पाए भने हामीलाई तीनतीन हजार दिइयो। यो कस्तो मूल्यांकन हो? यसलाई पक्षपात भन्ने कि अन्याय?
राजनीति होस् चाहे साहित्य, अर्थशास्त्र होस्, चाहे चिकित्सा विज्ञान हरेकको आआफ्नो ध्येय र गन्तव्य हुन्छ। त्यस्तै गायन र सङ्गीतको लक्ष्य र गन्तव्य के हो? गायन, सङ्गीत वा कला एउटा यस्तो कुरा हो, जसको कुनै सीमा, गन्तव्य वा अन्तिम उद्देश्य हुँदैन। जतिजति गाउँदै वा सङ्गीत गर्दै गयो, उतिउति नयाँनयाँ क्षितिजहरु खुल्दै जान्छ। यो एउटा अनन्त यात्रा हो। बीथोवेनले एक ठाउँमा भनेका छन्, वास्तविक कलाकारसँग अहं भन्ने चीज हुँदैन। दुर्भाग्यवश उसले देख्छ, कलाको कुनै सीमा हुँदैन। आफू आफ्नो उद्देश्यभन्दा कति टाढा छु भन्ने कुरा ऊ अस्पष्ट रुपमा मात्रै थाहा पाउँछ। अरुले उसको प्रशंसा गरे पनि ऊभन्दा राम्रो प्रतिभा टाढाको सूर्यझैँ चम्किएको स्थानमा आफू पुग्न नसकेकोमा उदास भइरहन्छ।
राप्ति न्युज २४ बाट
← बालकोटमा आज ओली र प्रचण्डबीच के कुरा भयो ल पढ्नुस !
हिरो श्रीमान लाइ श्रीमती द्वारा अचम्म को अन्तिम पत्र →